विद्युत शायद ऊर्जा सबैभन्दा अध्ययन मानिसजातिको स्रोत छ र फलस्वरूप, यसलाई छैन के सोच्न भनेर राम्ररी हाम्रो जीवनमा मूल लिएको छ - sacrilege छ। तर एक पल्ट, शताब्दीयौंदेखि, मान्छे मा दैनिक जीवन प्रयोग गरेका छन् मात्र मजा खेलौना छ - grated पत्थर ऊन सानो वस्तुहरू निकाल्न। यो पत्थर वर्तमान अम्बर थियो, र ग्रीक मा उहाँले "इलेक्ट्रन" भनिन्छ। शुल्क वाहक को lightest - धेरै शताब्दीयौंदेखि पछि, यो नाम पहिलो सार्वजनिक प्राथमिक कण प्राप्त गरेको छ। भाग्य इलेक्ट्रॉन गर्न प्रकारको थियो: यो मुख्य वाहक भए पनि बिजुली क्षेत्र को ऊर्जा।
को प्रोटन-न्यूट्रोन र इलेक्ट्रन गोले को कोर को केन्द्र मा - यसको प्रारम्भिक स्तर मा, पदार्थ ग्रह प्रकार को अणु संरचना छ। बाहिरी इलेक्ट्रन खोल पदार्थ को interatomic ठाउँ त्यसैले तिनीहरूलाई केही, प्राथमिकताको ती धातु मुक्त-इलेक्ट्रन बादल गुण प्रदर्शनी कि गठन गरिएको छ मा अणुहरु को इलेक्ट्रॉनों आदान प्रदान। सामान्यतया यस्तो सामाग्री तार को बिजुली वर्तमान दिइरहनुभएको लागि गरिन्छ। हालको स्थानान्तरण दक्षता मा सहित धेरै कारण प्रभावित छ र सञ्चालकको प्रतिरोध - प्रत्येक प्रवाहकीय सामाग्री अभिन्न सुविधा छ। कंडक्टर को अन्त्य स्रोत जडान गर्न भने भोल्टेज, त्यसपछि यो साथ प्रवाह हुनेछ बिजुली वर्तमान। यसको घटना लागि कारण - सञ्चालकको को अन्त्य मा सम्भावित फरक। इलेक्ट्रॉनों, विद्युत क्षेत्रमा रहेको, सानो मा ठूलो क्षमता एक निर्देशित गति, को सञ्चालकको कुनै पनि लम्बाइ साथ गठन र wherein शक्ति आपूर्ति ऊर्जा ओसारपसार गरिन्छ। एक बिजुली सर्किट जोडिएको कुनै पनि प्रयोगकर्ता हुन सक्छ यो ऊर्जा प्रयोग गर्नुहोस्।
सामाग्री को सबै भन्दा राम्रो, तार प्रसारण लाइनहरू शक्ति बोट बाट किलोमिटर हजारौं भन्दा बिजुली प्रसारित कि को निर्माण को लागि प्रयोग कंडक्टर। सामाग्री को कंडक्टर चयन लागि मापदण्ड के हो? यस्तो विशेषता कंडक्टर को प्रतिरोध छ। कसरी यो एक सञ्चालकको मा नै प्रकट? बिजुली को सिद्धान्त अनुसार, मुक्त इलेक्ट्रॉनों एक निश्चित ऊर्जा भइरहेको, कंडक्टर मार्फत प्रवाह। आफ्नो आन्दोलनहरु को बाटो मा कुरा को अणुहरु संग टक्कर हुन्छन्, र तपाईं तिनीहरूलाई संग ऊर्जा साझेदारी गर्न छ। हामी यो "redistribution" महसुस, तर गर्मी सञ्चालकको रूपमा ऊर्जा वास्तव मा हानि।
को सञ्चालकको प्रतिरोध - यो अनन्त ईन्जिनियरिङ् समस्या, जसमा कार्य को मुख्य भाग implies। यो मापदण्ड छ सर्किट ऊर्जा क्षणिक हानि निर्धारण, र तिनीहरूले तार लम्बाइ एल अर्को सञ्चालकको ज्यामितीय प्यारामिटर प्रतिरोध प्रभावित को वृद्धि संग अनुपात बढ्न एक छ तार को अनुभागीय दृश्य पनि सञ्चालकको क्रूसमा खण्ड मा वृद्धि संग एस, यसको प्रतिरोध proportionally घट्छ। 1 मिमी वर्ग को सञ्चालकको पार खण्ड को प्रतिरोध: आफ्नो उपयुक्ततामाथि मामलामा सामाग्री तार रूपमा मूल्याङ्कन गर्न, अर्को विशेषता, "resistivity" भनिएको छ जो प्रयोग। र 1 मिटर लम्बाइमा। अब, resistivity ƿ लागि तालिका देखि एक मूल्य लिएर पछि उपयुक्त सामाग्री को सञ्चालकको प्रतिरोध गणना गर्न सक्छन्। सूत्र आर को मान दिन्छ - Homme यदि ƿ - Omm * m / वर्ग मिमी। , एस - मिमी वर्ग, एल -। एम
आर = (ƿ * एल) / एस
अनुसार सूत्र मूल डाटा ज्ञात छ भने, सबै अवस्थामा लागि गणना गर्न सक्दैन भन्नुभयो। र सञ्चालकको के हो भने, र टेबल र मीटर व्यास र तार को लम्बाइ हात मा साधन एक सञ्चालकको प्रतिरोध कसरी उपाय, अर्को शब्दमा, छैन? यस्तो अवस्थामा, नाप्ने यन्त्र, एउटा ओम-मीटर भनिन्छ जो प्रयोग गर्नुहोस्।
सञ्चालनको विभिन्न सिद्धान्तहरू लागू गर्ने लागू ohmmeters विभिन्न embodiments पनि छ, तर अक्सर सञ्चालकको प्रतिरोध परीक्षण र एक calibrated मापन रोकनेवाला वा नाप्ने सर्किट मा कालिब्रेसनभएको वर्तमान संग परीक्षण रोकनेवाला भर भोल्टेज ड्रप मार्फत वर्तमान नाप्ने सर्किट लागू गरिएको छ।
यम ग्रह को सूचीबाट बहिष्कृत हुँदा र किन?
प्रजनन अलग - प्रजाति को विकास मा पहिलो कदम हो
मानव खोपको बाह्य आधार